वामदेवका लागि उपनिर्वाचन गराउनु लोकतन्त्रको भ्रष्टीकरण र राजनीतिक अनिष्टताको संकेत हो -डा. भट्टराई - Gokarna News from Nepal
वामदेवका लागि उपनिर्वाचन गराउनु लोकतन्त्रको भ्रष्टीकरण र राजनीतिक अनिष्टताको संकेत हो -डा. भट्टराई
काठमाडौँ- नयाँशक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले बर्दियाबाट पराजित नेकपाका नेता वामदेव गौतमलाई काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ७ बाट चुनाव लडाउनु चरम राजनीतिक अनिष्टको संकेत भएको टिप्पणी गरेका छन् । भट्टराईले यसलाई लोकतन्त्रको भ्रष्टीकरणको संज्ञासमेत दिएका छन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘काठमाडौं ७ का निर्वाचित सांसदलाई राजीनामा गराएर बर्दियाबाट हारेका वामदेव गौतमलाई संसदमा पुर्‍याउन अर्को खर्चिलो चुनाव गराउनु लोकतन्त्रको भ्रष्टीकरण र आगामी दिनमा चरम राजनीतिक अनिष्टताको संकेत हो । बेलैमा होस पुर्‍याऔं !’ भट्टराईले दलीय घेराभन्दा माथि उठेर लोकतन्त्रको रक्षा र समृद्धीकरण गर्न अपिल पनि गरेका छन् ।
काठमाडौं क्षेत्रनम्बर ७ बाट निर्वाचित सांसद् रामवीर मानन्धरलाई राजीनामा दिन लगाएर त्यहाँ हुने उपनिर्वाचनमा वामदेव गौतमलाई उम्मेदवार बनाउने तयारी नेकपाले गरेको छ ।
सांसद मानन्धरले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर आफूले वामदेवका लागि राजीनामा दिन लागेको बताएका थिए । रामवीरलाई राजीनामा वामदेवलाई चुनाव लडाउने विषयले अहिले व्यापक चर्चा पाएको छ । यसको पार्टीभित्र र बाहिरबाट विरोध र समर्थनमा आवाज उठाउन थालिएको छ । यद्यपी, नेकपाले वामदेवलाई उठाउने औपचारिक निर्णय भने गरेको छैन ।
यसैगरी, मानन्धरको राजीनामा समेत स्वीकृत भएको छैन । आज बुधबारका लागि बस्ने भनिएको सचिवालय बैठक समेत शनिबारका लागि सारिएको छ ।